विशेष के छ त भिडियोमा? जुन भिडियो ८० लाख बढीले हेरे भिडियो हेर्नुहोस् – PathivaraOnline
Home > भिडियो > विशेष के छ त भिडियोमा? जुन भिडियो ८० लाख बढीले हेरे भिडियो हेर्नुहोस्
admin October 7, 2020 भिडियो	0
पछिल्लो समय मानिसहरुमा भिडियो शेयरिङ मोबाइल एप टिकटकको लोकप्रियता बढी नै छ । छोटो भिडियो लि,प–सि,ङ्क सेयरिङ्ग एप टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । विभिन्न किसिमबाट बनाइएका टिकटक भिडियो तीव्र रुपमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइहाल्छन् ।यस्तै एउटा भिडियो अहिले भाइरल भएको छ । उक्त टिकटक भिडियोमा एक युवतीले नृ,त्यु गरिरहेकी हुन्छिन् । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस् ***
उनको नृ,त्यका का,रण उक्त टिकटक भिडियोले चर्चा पाएको नभइ भिडियोमा देखिएको एउटा दृश्यले सबैको ध्यान तान्नुका साथै चकित पारेको छ ।
भिडियो अपलोड गर्दै ती युवतीले लेखेकी छन् ‘यो भिडियोमा म एक्लै छैन । मरो साथमा यहाँ अरु कोही पनि छन् । तर, मलाई थाहा छैन को छ भनेर ।’ यो भिडियोलाई ७० लाखभन्दा बढीले हेरेका छन् । इन्टरनेट प्रयोग गर्ने हरेक उमेरका मानिसहरु अहिले एउटा चिनियाँ एपमा झुम्मिएका छन् ।
टिकटक एपमा पृष्ठभूमिको आवाजमा ओठ चलाएर १५ सेकेण्ड सम्मको आफ्नो भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेहरुको संख्या करोडौं पुगेको छ ।के हो टिक टक ?टिक टिक एक सोसल मिडिया एप्लिकेसन हो । जसका माध्यमबाट स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले छोटा छोटा भिडियो (१५ सेकेण्ड सम्मका) बनाएर शेयर गर्न सक्दछन् । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस् ***